Vehivavy inspekteran’ny ladoany iray sy tompon’andraikitry ny informatika iray no naiditra am-ponja, ny sabotsy lasa teo, rehefa niakatra Fitsarana ny raharaha. « Ireo olona ireo aloha no fantatro hatreto fa naiditra am-ponja.
Miasa ao Antanimena avokoa izy ireo ary ahiahiana ho tompon’andraikitra mihitsy tamin’io raharaha io », hoy Razafindramiandra Vola, Tale jeneralin’ny ladoany, raha nanontaniana tamin’ny antso an-taroby avy any Bruxelles(Belzika), omaly. Misy olona hafa voarohirohyamin’ity. « Efa tamin’ny alarobia izahay no nanomboka ny famotorana.
Somary sarotra ilay izy satria feno anarana hosoka ireo antontan-taratasy. Fantatra ihany anefa ireo olona voarohirohy, ka olona roa no nosamborinay. Ny iray teratany malagasy, tetsy akaikin’ny tranobe Fiaro Ampefiloha no voasambotra. Ny faharoa kosa dia teratany vahiny, ka teny Ivato, raha izy avy any ivelany iny, no nosamborina », hoy ny kaomisera Velotsara Marcel, talen’ny famotorana eo anivon’ny polisim-pirenena.
Mbola hisy fisamborana
Araka ny loharanom-baovao ihany dia ny Birao mahaleotena miady amin’ny kolikoly(Bianco) no miandraikitrany famotoranamikasika ity raharaha ity, siangy ny polisy misahana ny heloka bevava kosa no nanao ny fisamborana. « mbola nisy olopna iray tokony ho nosamborina, saingy voalaza fa lasa any Toliara. Rehefa nampahafantarina ny polisy any an-toeranadia fantatra izy io fa efa tratra ihany koaio olona io », hoy ity tompon’andraikitra eo anivon’ny polisy ity.
Tamin’ny alalan’ny fitarafana ireo kaotenenra no nahatratrarana ireo hazo sarobidy ireo. Entana tao anatin’ireo kaotenera dia hoe tsaramaso sy taozavatra malagasy no tao anatiny.